प्रशंसापत्र - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
साम्प्रदायिक समाचारहरूले हाम्रो आय बढाउन कसरी मद्दत पुर्‍यायो
50 महिनामा लगभग 4% द्वारा
Numb-ify सब भन्दा बलियो Numbing र पीडा राहत
साम्प्रदायिक समाचार प्रशंसापत्र
हामी केही कुरा गर्न चाहन्छौं कि कसरी कम्युननल समाचारले हाम्रो ब्रान्डलाई मद्दत गर्‍यो Numbify अनलाइन Numbing उत्पाद कोटी मा भाइरल जानुहोस्!
हाम्रो बिक्री फेरि बन्द भयो र करीव तीन बर्षको लागि सुस्त। हामीले निर्णय गर्‍यौं कि हामीले हाम्रो बजारलाई उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्न आवश्यक छ, तर सीमित बजेटमा एउटा सानो कम्पनी भएकोले हामीले रचनात्मक हुनुपर्दछ। हामीलाई छेउछाउको परिक्षणबाट थाहा थियो कि हामीसँग एकदम कडा नब्नि cream्ग क्रीम, जेल र स्प्रे छ, जुन हामीले परीक्षण गरेका अरू भन्दा बलियो छ। यद्यपि सुन्न बजारमा यस्तै धेरै अन्य कम्पनीहरूको साथ, र लगभग कुनै मार्केटिंग डलर छैन, हाम्रो मार्केटिंग प्राय: भीडमा हराउँथ्यो। हामीले विज्ञापनदाताहरूलाई पनि भाडामा लिएका छौं र गुगल विज्ञापनहरू पनि चलाएका छौं, र व्यावसायिक अप्टिमाइजेशनको साथ पनि पैसा हाम्रो प्रयासहरूको लागि देखाउनको लागि द्रुत गतिमा अघि बढ्यो।
जब हामीले साम्प्रदायिक समाचारको बारेमा सुनेका थियौं। हामीले एक मित्र मार्फत फेला पार्यौं कि कम्युनल समाचारले कसैलाई पनि अनुमति दिन्छ, कम्पनीहरूले लेख लेख्छन्। त्यसोभए हामीले उसलाई धेरै लेख लेख्न भन्यौं किनकि त्यसले सधैं उत्पाद समीक्षा लेख्न मनपराउँदछ। यो वास्तवमै सजिलो छ, उसले मलाई पाँच मिनेटमा देखायो; तपाईं आफैंले यो गर्न सक्नुहुनेछ, वा अफिसका कर्मचारीले लेख्नको लागि काम गर्नुहोस् यदि तिनीहरू एक राम्रो लेखक हो।
हामीले उसलाई मनपर्ने कुञ्जीमा फोकस गर्यौं कडा, बलियो, सुन्न र सुन्न। उनले हामीलाई बताए कि यदि हामीसँग आक्रमणको एक कोण भन्दा बढी छ भने हामीले अझ राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न सक्दछौं। केही विकल्पहरू छलफल गरिसकेपछि, हामीले एउटा विज्ञापन दिने निर्णय गर्‍यौं। सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको यो प्रति क्लिक १ डलर मात्र थियो, मैले गुगलका साथ विज्ञापनहरू चलाएको छु र तुलनामा यो एकदम सस्तो देखिन्थ्यो। त्यसैले हामीले केहि महिनाको लागि एक महिनामा २०० अमेरिकी डलर कोशिस गर्न कटिबद्ध छौं र हेर्नुहोस् यसले केही असर पार्छ कि भनेर। उनले हामीलाई साम्प्रदायिक समाचार विज्ञापनहरूसँग भने जुन हामी हामीलाई लगभग १1०० लिंक देख्दछौं। जस्तो तपाईले अहिले अनुमान गरिसक्नु भएको छ, म विज्ञापनलाई घृणा गर्दछु तर २०० and र क्लिक बेस्डले सजिलै टेस्टको रूपमा हेर्न मिल्छ जस्तो देखिन्छ, र डलर एक विस्तृत दर्शकको साथ राम्रोसँग व्यवस्थित साइटको लागि क्लिक एकदम आकर्षक लाग्यो।
एकै साथ हामी हाम्रो अमेजन, वालमार्ट, र ईबे खाताहरूमा गएर राम्रो दाँत कंघीको साथ गयौं, र हामीले यो निश्चित गर्‍यौं कि हाम्रो Numbify उत्पादनहरू उही मुख्य शब्दहरूले लोड गरिएको थियो र तिनीहरूलाई हाम्रो Numbify वेबसाइटमा दोहोर्याइएको छ जसले हाम्रो आमा र पप व्यवसायमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। यो पातलो तर धेरै राम्रो राखिएको भाग "मजबूत / मजबूत / सुन्न / सुन्न" बजार को।
हामीले निम्न लेखहरू साम्प्रदायिक समाचारमा प्रकाशित गरेका थियौं:
सामयिक पीडा राहतको लागि सब भन्दा बलियो Numbing क्रीम!
उन्नत प्रारम्भिक गठिया पीडितहरूले पीडा राहतको लागि सब भन्दा बलियो नाम्बिंग लिडोकेन खोजिरहेका छन्
सबै भन्दा राम्रो / सब भन्दा राम्रो Numbing उत्पादन के हो? स्वस्थ दुखाइ राहत र अ .्कग्रस्त जानकारीको लागि मार्गनिर्देशन
ट्याटु कलाकार क्र्याग बिस्ले - विशेष अन्तर्वार्ता र उत्तम / स्ट्रिटनेस्ट नाम्बिंग क्रीम
बेडसोर घावहरूको देखभाल उपचार - सब भन्दा बलियो बेडसोर नाम्बिंग क्रीम दर्द, हिलिंग र खुजली राहतको लागि डिजाइन गरिएको
सर्वश्रेष्ठ ट्याटू आफ्टरकेयर उत्पादन रेटेड!
हामीले यी लेखहरूमा केही उत्कृष्ट सामग्री पायौं। कृपया उनीहरूको जाँच गर्न नहिचकिचाउनुहोस्, तपाईं तिनीहरूलाई मन पराउनुहुनेछ !!!
हामीले हाम्रो अन्य साइटहरूसँग र हाम्रो मुख्य साइटसँग लि linked्क गरेका छौँ लेखहरूमा हामीलाई थप धक्का दिने र साम्प्रदायिक पृष्ठलाई माथि सार्न। आज पनि हामी यस स्वतन्त्र तेस्रो पक्ष साइटसँग लिंकहरू बढाउनको लागि कुनै कारण पत्ता लगाउन कोशिस गर्छौं, जब उनीहरूको स्तर माथि जान्छ, हाम्रो पनि।
त्यसो भए लगत्तै बिक्री बढ्न थाले। पहिलो वालमार्ट, उनीहरूले रणनीतिमा छनौट गरे, र हामीलाई बिंग खोजी विज्ञापनमा कडा नम्बरको लागि राख्न सुरू गरे। त्यसपछि अमेजनले हामीलाई माथि सार्‍यो, र हामीले कोटीहरूमा प्रभुत्व जमायौं, यहाँसम्म कि अमेजनको छनौटलाई सशक्त सुन्नका लागि पनि बनाउँदछौं! लगभग month महिनामा हाम्रो कुल बिक्री लगभग %०% माथि थियो। 4-50-3 मा हामीले अमेजन खोजमा फोटो लिएका थियौं सब भन्दा बलियो सुन्न हामीसँग शीर्ष 22 स्थितिहरूको 24 थियो।
यदि तपाइँ अमेजन खोज्नुहुन्छ भने सुन्न क्रिमहरू हामीसँग शीर्ष 24 मा शून्य छ। ठूला खर्चकर्ताहरू, र काटिएको घाँटीका युक्तिहरू भएको बजारमा हामीले आफ्ना सीमित संसाधनहरूको साथ क्षेत्र प्रवेश गर्न गाह्रो भएको थियो।
हामीले सिक्यौं कि अमेजन र वालमार्टले विशेष रूपमा उत्पाद सूचीकरणको साथ समान कुञ्जी शब्दहरूमा बिंग र गुगल वेब क्रमबद्धताको साथ समन्वयमा तिनीहरूको उत्पाद स्थान मिलाउँछ। सबै भन्दा राम्रो, हामीले यो सिक्यौं कि केही समय र प्रयासको साथ एक सानो विज्ञापन बजेटको साथ पनि, तपाईं पनि इन्टरनेट मार्फत एक सफल मार्केटिंग अभियान सुरू गर्न सक्नुहुनेछ। साम्प्रदायिक समाचार को सहयोगको साथ!
हाम्रो सांप्रदायिक समाचार विज्ञापनको साथ, हामी हाम्रो विज्ञापन वेबसाइटमा सिधा जडान गर्न हाम्रो विज्ञापन क्लिकहरू सेट गर्‍यौं Numbify.com र हाम्रो विशेष कोठामा हाम्रो बलियो इन्टर्नेट रैंकिंग। हामीले याद गर्‍यौं कि दुबै बिंग र गुगल खोजीले हामीलाई हाम्रो मुख्य शब्दहरूमा शीर्ष स्थानमा राख्यो। वर्षौंको पहिलोपटक हामी उल्लेखनीय बृद्धि भएको देखेका छौं Numbify.com अनलाइन आदेशहरू। हाम्रो वेबसाइट Numbify.com मार्च 300 मा लगभग 2019% माथि अर्डर ट्र्याक गर्दैछ, लगभग 80% नयाँ ग्राहकहरू भएकोले हामीले अक्टूबर 2018 को सुरू गर्नु अघि महिनाको तुलनामा।
यदि यो कथा केहि ओभरस्प्लीफाइड जस्तो लाग्छ भने, यो सत्य हो। हामीले हरेक उत्पादन पृष्ठ शब्द, लेख र विज्ञापनमा धेरै मेहनत गर्नुपर्‍यो। ठूला पुशका लागि तयार हुनको लागि असंख्य घण्टा ट्वीक गर्न र अनुकूलन गर्नमा खर्च भयो। अब ट्राफिक पाउने बारे चिन्ता गर्नुको सट्टा, हामीले रूपान्तरणको लागि हाम्रो वेबसाइटलाई अनुकूलित गर्नमा फोकस गर्नुपर्नेछ, किनकि ट्राफिक बिक्री भन्दा छिटो बढ्दैछ।
जहाँसम्म एक सानो व्यवसाय मालिकको रूपमा वास्तवमा समस्याको प्रकारको तपाईले चाहानुहुन्छ, बढ्दो पीडा, नगद प्रवाह मुद्दा भन्दा !!!
यदि तपाईं आफूलाई शीर्ष आला बजारहरूमा राख्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले रोज्नुभयो (उदाहरणका लागि हामीलाई सबैभन्दा सुदृढ संख्याको साथ उदाहरणका लागि) तब तपाईंको बिक्री बढ्नेछ। हामीले कडा परिश्रम गरेका छौं एक मजबूत उत्पाद पाउनको लागि, र केवल वक्तव्यहरू दियौं जुन हाम्रो परीक्षण र उत्कृष्ट नन्न कम्पोनेन्टहरू द्वारा समर्थित थियो। हामी सम्पूर्ण बजार पछाडि जाने बारे चेतावनी दिन्छौं, वा खराब गुणको उत्पादनको साथ यो कार्य गर्दछौं। हामीले तीन बर्ष बित्नुभयो र हाम्रो प्रगति सुस्त थियो, बजारमा सब भन्दा राम्रो उत्पादनको साथ पनि। अब १ कुञ्जी विशिष्ट लक्षित स्थिति छनौट गरेपछि, र त्यसपछि तीन मूल दृष्टिकोण अपनाए, हामीले सफलता भेट्टायौं। अब यो दोहोर्‍याउने समय हो।
यस पटक वरपर, हामीले मात्र पैसा बचत गरेनौं, (कुनै पनि सानो व्यवसाय मालिकको लागि ठूलो प्राथमिकता) तर हामीले हाम्रो अभियानको साना भागहरूको जिम्मेवार हुन पनि सिक्यौं। यसको कारणले गर्दा, म लाभहरू देख्न सक्दछु, प्रत्येक चरणमा। अब हामी पहिलो पटक मार्केटिंगको बहुमत नियन्त्रण गर्छौं, जुन अद्भुत छ।
हामी हाम्रा सहयोगीहरूलाई निःशुल्क रूपमा केही उत्कृष्ट लेखहरू लेख्न अनुमति दिँदै, र त्यस्ता कम मूल्य भएको र विज्ञापनको उपयोग गर्न सजिलो भएकोमा (विज्ञापनमा केही सयौं डलर केही पनि छैन) को लागि साम्प्रदायिक समाचारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं। लगभग zero महिनामा हामीले देख्यौं कि हामीले लगभग zero०% राजस्व वृद्धि कसरी हासिल गर्‍यौं, लगभग शून्य वृद्धिशील मार्केटिंग खर्च बढेर। हामी प्रतीक्षा गर्न सक्दैनौं जब सम्म हामी अर्को उत्पादन शुरू गर्दैनौं दुखाइ राहतको लागि सुन्नुहोस्। हाम्रो प्रारम्भिक परीक्षण देखाउँदछ कि यो पनि सब भन्दा बलियो सामयिक हुनेछ पिडाबाट राहत उत्पादन हाम्रो सबैभन्दा शक्तिशाली Numbing क्रीम को एक संस्करण - Numbify.
मलाई थाहा छ, म हाम्रो सफल रणनीतिहरूको धेरै कुरा प्रकट गर्नुहुन्न, तर किनभने कम्युनल न्यूजले हाम्रो सफलतालाई मद्दत गरेको छ कि मलाई लाग्यो कि हामीले उनीहरूको र उनीहरूको ग्राहकहरूको लागि हामीले थोरै सफलताको प्रतिबिम्बित गर्नुपर्दछ, किनभने तिनीहरू त्यस्तो आवश्यक हो भन्ने कुरा जान्दछन्। हाम्रो कथा को भाग। कहिलेकाँही तपाईले क्रेडिट साझेदारी गर्नुपर्नेछ।
Numbify अपरेशन प्रबन्धक
यहाँ तपाइँको एड अपलोड गर्नुहोस्, यो धेरै नै सजिलो र केवल 1 प्रति क्लिक।
अधिक विज्ञापन जानकारी को लागी हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।